नेपालीको जस्तो कोमल मन संसारमा कतै छैन : निर्देशक शिशिर राणा – Waikhari
गृहपृष्ठ पत्रपत्रिका बाट नेपालीको जस्तो कोमल मन संसारमा कतै छैन : निर्देशक शिशिर राणा
नेपालीको जस्तो कोमल मन संसारमा कतै छैन : निर्देशक शिशिर राणा
कलाकार/निर्देशक : शिशिर राणा
करिब एक दशक देखि विज्ञापन व्यवसायी तथा कलाकारको रुपमा काम गरिरहनु भएका शिरिर राणा ले निर्देशन गर्नुभएको तिमीसंग चलचित्र २०७४ चैत्र २३ गते शुक्रबार देखी नेपाल भर प्रर्दशन भैसक्यो ! । उक्त चलचित्र तिमीसंगका निर्देशक शिरिर राणासंग वैखरी डटकमका प्रतिनिधिले गरेको छोटोमिठो कुराकानी :
निकै व्यस्त देखिनुहुन्छ नी ?
हो नी फिल्म रिलिज हुदैछ, दौडा दौड छ ।
डेब्यु चलचित्र हो , कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
एकदम नर्भस्, तर चलचित्रका सबै टिमले राम्रो काम गरेका छौं सबैले आफ्नो सक्दो मेहेनतले काम गरेकोले त्यस्तो डर भने छैन, अनि तपाँइ जस्तै मिडियाका साथीहरुले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ । सबैको मेहेनतले चलचत्रि राम्रो बनेको छ अब दर्शकलाई कत्तिको मन पर्छ त्यो त शुक्रबारबाट नै थाहा हुन्छ ।
तिमीसंगमा खास कथा के उठाउनु भएको छ ?
हाम्रो देश पर्यटकिय क्षेत्र धेरै भएको देश हो, यहि विषयलाई चलचित्रमा समेटेको छु । यस चलचित्र हेरेर विदेशी पर्यटक अथवा नेपाल नआएका नेपाली सन्तानहरुले पनि एक पटक नेपाल नजिकबाट हेर्नुपर्छ भनेर आँउनेछन् ।
यो त अलि गम्भिर बिषय भएन र ?
धेरै नेपाली विदेशिएका छन् । उनीहरुका सन्तानहरुले नेपाल देखेकै हुदैनन् । नेपाल गरिब देश हो यहाँ राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा पछि परेको छ यहाँ भष्टचार र लोडसेडिगं हुने देश भनेर चिन्छन् । तर यी सबै वेतिथथीका कुरा भन्दा पनि धेरै चिज नेपालमा हेर्न लायक छन है जस्तो यहाँका मान्छेको कोमल मन, हार्दिकता र मिलनसार वानी अनि यहाँको पर्यावरणीय क्षेत्रहरु जति हेरे पनि आँखामा नबिझाउने भएकोले यही विषयलाई चलचित्रमा उठान गरेको हो ।
पहिले देखिनै मिडियामा काम गरिरहनु भएको थियो तर यो चलचित्र बनाउँदा के कस्तो समस्याहरु आए ?
हो हामीले अत्यन्तै अप्ठयारो स्थान अन्नपुर्ण वेश क्याम्पमा चलचित्रको शुटिगं गरेका थियौं । घोडेपानी, पुनहिल जस्ता स्थानमा जहाँ गाडि जाँदैन तर हामीले आफ्नो समान आँफै बोकेर र शुटिंगको समान खच्चडलाई बोकाएर लगेका थियौं । त्यहाँ माथी पुगेर शुटिगं थालेपछि त्यहाँका स्थानियहरुले हामीलाई निकै सहयोग गर्नुभयो । काम गर्दा त्यस्तो गाहरो भएन तर अहिले फिल्म रिलिज गर्ने वेलामा भने निकै धपेडी भइरहेको छ ।
भने पछि चलचित्र रिलिज गर्ने वेला सम्म सजिलै भयो ?
होइन होइन चुनौतिहरु धेरै आए । तर त्यसलाई आफुले कसरी लिने भन्ने कुरा हो । चलचित्र वितरणको लागी काठमाडौंमा गोपाल कायस्थदाईले लिनुभएको छ र काठमाडौं बाहिर डि सि एन ले लिएको छ र हाइलाइट नेपालले पनि युटुयुब राइट र विदेश प्रर्दशनको लागी सम्झौता गरिसकेको छ त्यसैले सजिलै भइरहेको छ ।
चलचित्रले लगानि उठाउँछ भन्ने कत्तिको आश छ ?
राम्रो चलचित्र बनायो भने पक्कै पनि लगानि सेभ हुन्छ, राम्रो चलचित्रहरुले प्रशस्तै पैसा कमाएका पनि छन् र सबैभन्दा मुख्य कुरा त दर्शकले मन पराउन पर्यो । दर्शक भनेका हाम्रा भगवान हुन् र राम्रो चलचित्रलाई दर्शकले न्याय गर्छन् जस्तो लाग्छ ।